आलमलाई नख्‍खु कारागार सार्नुको रहस्य ! | Suvadin !
काठमाडौं । रौतहट बमकाण्डका अभियुक्त अफताब आलमलाई रौतहट जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्‍ने आदेश दियो । उक्त आदेशपछि उनलाई रौतहट जिल्ला करागार राख्नुको साटो काठमाडौंस्थित नख्खु कारागार सारियो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसदसमेत रहेका आलममाथि २०६४ साल चैत २७ गते रौतहटको राजपुरमा भएको बम विस्फोटमा परी घाइते भएकाहरुलाई इटाभट्टामा हाली जिउँदै जलाएकोआरोप छ ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार आलमलाई जिल्ला कारागार रौतहटमा राख्दा त्यहाँ आलममाथि नै आक्रमण हुनसक्ने खतरा रहेको कारण उनलाई काठमाडौं पठाइएको हो । यस्तै आलमलाई रौतहटमै राख्दा उनले समर्थकलाई भड्काएर असहज अवस्था सिर्जना गर्नसक्ने डर पनि स्थानीय प्रशासनलाई थियो ।
आलम नेपाली कांग्रेसका निर्वाचित संघीय सांसद हुन् । राजनीतिमा राम्रो प्रभाव भएका र आलमकै निकट रहेका साविकको जिंगडवा बेलबिथवा ५ तथा हालको परोहा नगरापालिका २ का वडाध्यक्षका उम्मेदवार थिए शेख सेराजुद्दिन । स्थानीय तहको निर्वाचनमा उनी नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट वडा अध्यक्षका उम्मेदवार थिए ।
त्यहाँ हालको नेकपा तथा तत्कालीन समयमा माओवादी केन्द्रको राम्रो पकड क्षेत्र थियो । स्थानीय तह निर्वाचनकै क्रममा विभिन्न समयमा यी दुई पार्टीबीच झडपसमेत भएको थियो । स्थानीय तहमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका तर्फबाट वडाध्यक्ष रहेका मोहमद एजाजुर रहमान विजयी भए ।
निर्वाचन सकिएपछि त्यसको केही दिनपछि २०७४ असोज ९ गते नेपाली कांग्रेसबाट वडाध्यक्षका प्रत्यासी रहेका सेराजुद्दिनका ३२ वर्षीय छोरा अकबर अलीको गोली हानी हत्या भयो ।
यो हत्यामा वडाध्यक्ष एजाजुर रहमानको संलग्नता रहेको भन्दै आलमकै निर्देशनमा पराजित वडाध्यक्षका उम्मेदवार शेख सेराजुद्दिनले ६ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिए । जाहेरीपछि घटनामा संलग्न भनिएका वडाध्यक्ष मोहमद एजाजुर रहमान, शेख सलिम, मोहमद तारिख, शेख मोहमद चौकत अली पक्राउ परे ।
पछि जिल्ला अदालत रौतहटमा भएको थुनछेक बहसमा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट दोषी नदेखिएको भन्दै जनही १ लाख ५० हजार धरौटीमा उनीहरुलाई रिहा गरियो ।
तर जिल्लाको थुनछेक आदेशप्रति चित्त नबुझाएका शेख सेराजुद्दिनले उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासमा निवेदन दिए । उच्च अदालतले उनीहरुलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्नु भन्ने आदेश दिएपछि अहिले उनीहरु ४ जना नै पुर्पक्षका लागि जिल्ला कारागार रौतहटको थुनामा रहेका छन् ।
तर राजनीतिक प्रतिशोधका लागि विपक्षीहरुलाई सक्काउने नीति लिएको र निराधार आरोप लगाएको भन्दै त्यसक्षेत्रमा आलमविरोधी गतिविधि बढिरहेको थियो । आरोप लगाउन आलमले निर्देशन दिएको र नियतबस फसाइएको भन्दै आलमको चर्को बिरोधसमेत भइरहेको थियो ।
विपक्षी दलका वडाध्यक्ष तथा अन्य ३ जना कार्यकर्तालाई जेल पठाएको स्थानमा नै आलमलाई लैजाँदा आलममाथि कारागारभित्रै आक्रमण गर्ने तयारी ती थुनुवाहरुले गरिरहेको सूचना प्रहरीकहाँ आएको थियो । प्रहरीले सो सूचना कारागार कार्यालयलाई दिएपछि कारागार कार्यालय रौतहटले सुरक्षा खतरा भन्दै आलमलाई काठमाडौं सरुवा गरेको थियो ।
आलमलाई कारागार कार्यालय रौतहटमै राख्दा उनीमाथि आक्रमणको खतरा मात्रै थिएन, उनलाई त्यहीँ राख्दा आन्दोलन चर्काउने खतरा पनि थियो । प्रहरीलाई प्राप्त गोप्य सूचना अनुसार यदि आलमलाई पुर्पक्षका लागि जेल चलान गरिएमा उनका समर्थकहरु उचालेर आन्दोलन गराउने आलमपक्षको योजना थियो ।
त्यसो त अदालतमा आलमविरुद्ध मुद्दा चलिरहेकै बेला र थुनछेक बहस भइरहेकै बेला पनि आलमपक्षले रौतहटमा आन्दोलन नगरेको होइन । यो मुद्दालाई नै प्रभावित पार्ने गरी आलम पक्षले आन्दोलन गरिरहेको थियो । आलम जेल गएमा उनी निर्दोष छन् भन्ने देखाउन र उनका पक्षमा माहोल देखाउन पनि रौतहटमा आन्दोलन गर्ने उनीहरुको योजना थियो ।
त्यसका लागि आलमपक्षले भारतबाट समेत मान्छे ल्याउने तयारी गरेका थिए । जेलभित्रै र बाहिरै पनि आन्दोलन हुनसक्ने र मुद्दालाई नै प्रभावित तुल्याउने कोशिस सुरु भएपछि आलमलाई रौतहटमै राख्नु सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि खतरा भएपछि उनलाई काठमाडौं पठाउनु प्रहरी र कारागार कार्यालयको लागि बाध्यात्मक अवस्था थियो ।